टिप्पणी मंगलबार, साउन १५, २०७५
दोलखाका राजा जयेन्द्र सिंहदेव (वि. सं. १५९१–१६०५) ले चाँदीको मुद्रा छाप्ने गरेको भीमेश्वर नगरपालिका–२, डाँडाथोक दोलखास्थित ‘टक्सार घर’ जीर्ण अवस्थामा छ ।
२०७३ पुसमा चरिकोट पुग्दा यो पंक्तिकारले भीमसेन मन्दिर परिसर, त्यस वरिपरिका ऐतिहासिक घरबस्ती, मन्दिर र टक्सार घर लगायत संरचना नियालेको थियो । अहिले पुनः पुग्दा पनि त्यहाँको अवस्थामा खासै परिवर्तन देखिएन । अन्यत्रभन्दा सम्पदा पुनर्निर्माणमा सबैभन्दा सुस्त गति दोलखामै देखिन्छ । ढलान घरले गाउँबस्ती ढाकिन थालिसके । इतिहासको कालखण्ड सम्झाउने घर भने भत्केर सकिंदैछन् । टक्सार घरको दुर्गतिले दोलखालाई मात्रै होइन, समग्र पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई नै गिज्याइरहेछ ।
पुरातŒव विभागको सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुन नसकेको तथा सम्पदा क्षेत्रको चार किल्ला तोक्ने काम हुन नसकेकाले दोलखाका सांस्कृतिक सम्पदाहरू पुनर्निर्माण प्राथमिकतामा पर्न नसकेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइमा कार्यरत आर्किटेक्ट किरण कवान बताउँछन् ।
उनका अनुसार भीमेश्वर नगरपालिकाको सम्पदा बस्ती र क्षेत्रको सिमाना कोरेर पुरातत्व विभागमा पठाइसकिएको छ । चारकिल्ला तोक्ने कामसँगै भत्के–नभत्केका सबै सम्पदा घर तथा सार्वजनिक महत्वका संरचनाको तस्वीर सहितको लगत पनि बनाउन सके सम्पदा जोगाउन सघाउ पुग्थ्यो ।
पुरातात्विक महत्वका मठ–मन्दिर, पाटी, पौवा तथा अन्य सार्वजनिक संरचनाको जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माणको दायित्वबाट केन्द्र तथा स्थानीय सरकार धेरै समय पन्छिन सक्दैनन्, ढिलो–चाँडो काम हुनैपर्छ । तर, स्वामित्वको समस्या आउने हुँदा ऐतिहासिक महत्वका निजी घरको संरक्षणतर्फ परिवार र राज्य दुवैतिरबाट बेवास्ता भएको देखिएको छ ।
टक्सार घर पनि यही चेपुवामा पर्ने डर छ । सम्बन्धित सरकारी निकायले नक्शांकन, प्रबलीकरण जस्ता प्राविधिक काममा सहजीकरण गरेर, आवश्यक परे ऋण–धन समेत दिएर परिवारका सदस्यलाई नै मर्मत तथा जीर्णोद्धारमा प्रोत्साहन गरी होमस्टे अथवा होटल चलाउन सके यस्ता मौलिक इतिहास बोकेका घरहरूले जीवन्तता पाउँछन् ।
नेपालकै एउटा महत्वपूर्ण सम्पदा भएकाले टक्सार भवनलाई मक्किन र सकिन दिनुहुँदैन । स्थानीय सरकार, परिवारका सदस्य र पुरातत्व विभागले हातेमालो गर्ने हो भने यो मासिंदैन । घरघरै संग्रहालय बनाउने रहरभन्दा माथि उठेर सम्पदालाई जीवन्त रूपले संरक्षण गर्ने रहर गर्नेको जय होस् !